တင်ဒါအသိပေးချက် - Ulukışla-Yenice စခန်းများကြားရှိ 37 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုအားဖြည့်ခြင်း - RayHaber
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးတုရု၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် signal စနစ်များ Alignment အတွက်Ödemişဘူတာလမ်းမကြီး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Haydarpasa တူရကီလိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: + 392 742 - 395 700 + လက်ဝါးကပ်တိုင် Slope စီစဉ် »
အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အားကောင်းလာအကြားတွေ့Ulukışla-Yenice ဘူတာအမှတ် 37
TCDD ADANA6။ ဒေသန္တရရုံး
37 အမှတ် 4734 အပိုဒ်လေလံနေဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေသာအီလက်ထရောနစ် ECAP ထဲကဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အာူး 19 အမှတ်အကြားတည်ရှိသောUlukışla Yenice စခန်းများ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
က) အမည်: TCDD ADANA6။ ဒေသန္တရရုံး
က) အမည်: 37 အကြားတည်ရှိသောUlukışla Yenice စခန်းများအမှတ်အာူးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း
224,00 တောင် Hole Injection ကိုဖွင့်လှစ်, Injection ကို 148,365, 1.312,500 M2 Gypsum အင်္ဂတေပြုလုပ်ခြင်းတန်ချိန် Making, ကျောက်ခေတ်ဖြည်ချပြီး M437,5003ဖြည့်ပါ, 262,500 M3 အခြေခံ Making
ဂ) လုပ်ရမည် / Place အပ်Karaisalıbucagအဆိုပါ IST-stop ။ အကြား
ဃ) ကာလ / Delivery Date: 30 ပေးပို့တည်နေရာ (သုံးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းမှ။
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 16.10.2019 - 10: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လမ်းမကြီးတညျဆောကျပါလိမ့်မည် (Yenice နှင့်အတူUlukışla- Yenice- Toprakkale - Mersin မှ) 18 / 02 / 2016 လမ်းများ TCDD6built လိမ့်မည်။ အသစ်နှင့်အတူဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာULUKIŞLA-YENİCE- TOPRAKKALE -9MERSİN intermediate station ကြားမှာလမ်းစည်းမျဉ်းများဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 32924 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: လွတ်မြောက်ရေးရပ်ကွက်Atatürk Caddesi 01240 SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224575354 - 3224575807 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာကဒီမှာမြင်နိုင်ပါသည်: https: // က) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏နူးညံ့မှ ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ်: ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ulukışla-Yenice အဆိုပါတံတားနှင့် Culvert အကြားတွင်လုပ်ခြင်းအတွက် Debus သန့်ရှင်းရေးနှင့်တည်းဖြတ်လိုင်းများကိုတွေ့ 10 / 08 / 2018 တံတားနှင့် Culverts အကြားတွင်Ulukışla-Yenice Debus သန့်ရှင်းရေးနှင့်တည်းဖြတ်လိုင်းများ TCDD ADANA6ပြုမိတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် Making Debus လိုင်းများအတွက်တံတားများနှင့် culverts အကြားတည်ရှိသောဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာUlukışla Yenice အစီအစဉ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 401974 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemudurlugu@tcdd.gov.t သုံးခုသည်) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီအမှတ် 12 Kayseri အကြားအလုပ်အကိုင်အကွဲဖွင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကူးပြောင်းခံရ 09 / 12 / 2014 အမှတ် 12 တူရကီနှင့် Kayseri စီးပွားရေးလုပ်ငန်း TCDD2အကြားတည်ရှိသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကွဲဖွင့်လှစ်ရန်အဖြစ်ပြောင်းလဲရလိမ့်မည်။ တစ်ဝိုက်ပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးတူရကီ, Kayseri မိုင်အကွာအဝေး: 56 + 283-56 + 399 အဆိုပါ 12 Noli အကြားတည်ရှိသောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပွင့်လင်းမှုပိုင်းခြားအလုပ်ဆောက်လုပ်ရေးသို့ဘာသာပြန်ထားသောအလုပ် 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2014 / 164475 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Marsandiz အပန်းဖြေ 06005 Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 - 3122111571 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: hakanozt@gmail.co ငါ d) ကိုတင်ဒါစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည်: ...
TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - ထို JCC ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်ယူမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက် Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် 15 / 08 / 2012 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) စုဆောင်း 01 ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 တစ်ရက်ဟာယယဇ်ပူဇော်၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, "Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏ Toprakkale လိုင်းဖြတ်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား Facility တည်ထောင်" ဟုအဆိုပါဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းအသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, နောက်တဖန်လုပ်ခံရရန် GCC ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်ယူမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုပြီးနောက်အလွန်အမင်းနိမ့်မေးမြန်း။ လူသိများသည်အတိုင်း, GCC, အီး + M - Ayko ၏လျှပ်စစ်ဖက်စပ်နု၏ရလဒ်သည်မိမိအယူခံငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် Sahin Yilmaz - ထိုဖက်စပ် 1 များအတွက်တင်ဒါများတင်ဒါရလဒ်များကိုမှ Emre Ray ရဲ့ကန့်ကွက်။ အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ...
TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ2၏ Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်း, 3, အ5။ ။ ။ ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပတ်သက်သောအကဲဖြတ်လေ့လာမှုများ ... 18 / 02 / 2013 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) စုဆောင်း, Kayseri 01 ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 တစ်ရက်ဟာယယဇ်ပူဇော်၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါနှင့်ဆက်စပ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားများနှင့်စက်ရုံတည်ထောင် Toprakkale ၏လိုင်းဖြတ်အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ,2။ ,3။ နှင့်5တင်ဒါ။ ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်ပြီးစီးခဲ့အကဲဖြတ်အလုပ်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။2နူးညံ့။ ပေါင် 20.912.954,3နှင့်အတူအပိုင်းတစ်ဦးသည်။ ပုဒ်မစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန Sahin Yilmaz 28.127.019 ပေါင်လေလံ - Emre Ray စွမ်းအင်ဖက်စပ်,5။ ၏အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ 26.597.000 ပေါင်လေလံနှင့်အတူ ...
အာူး 37 အမှတ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, TCDD Adana6။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လမ်းမကြီးတညျဆောကျပါလိမ့်မည် (Yenice နှင့်အတူUlukışla- Yenice- Toprakkale - Mersin မှ)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ulukışla-Yenice အဆိုပါတံတားနှင့် Culvert အကြားတွင်လုပ်ခြင်းအတွက် Debus သန့်ရှင်းရေးနှင့်တည်းဖြတ်လိုင်းများကိုတွေ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီအမှတ် 12 Kayseri အကြားအလုပ်အကိုင်အကွဲဖွင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကူးပြောင်းခံရ
TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - ထို JCC ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်ယူမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက် Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်းသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်
TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ2၏ Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်း, 3, အ5။ ။ ။ ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပတ်သက်သောအကဲဖြတ်လေ့လာမှုများ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: MD-Shake သတ္တုလိုင်းစခန်းများမိုင်အကွာအဝေးကြားမှာ: + ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမွေးမြူရေး၏အမှတ် 423 မှာ 148 423 261-55 +
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကီလိုမီတာအကြားလမ်းကြောင်း-MD သတ္တုတွင်းဘူတာလိုင်း: + ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမွေးမြူရေး၏အမှတ် 419 မှာ 579 419 845-51 +
ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်၏တည်ထောင်ဖြတ်တောက်ခြင်း Kayseri-Bogazköprü-Ulukışla-Yenice, Yenice-Adana-Mersin-Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်ရုံ
TCDD, အီး + M - Ayko လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီနှင့် Siemens ဖက်စပ် Kayseri ကုမ္ပဏီတစ်ခုက - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်း ...
TCDD Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale လိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစီမံကိန်း Sahin Yilmaz - ထိုများအတွက်တင်ဒါများ Emre ရထားဖက်စပ် kiki ရလဒ်များကို ...